ALAOTRA : Betsaka ireo zaza tsy ampy taona tafalatsaka amin’ny fijangajangana
Vokatry ny tsy fahatantesana ny mena miraviravy amin’ny resa-bola dia betsaka ny zaza tsy ampy taona no tafalatsaka amin’ny fijangajangana. 1er février 2017
Saika mbola mpianatra avokoa ny ankamaroan’izy ireny ary voalaza fa efa misy olona manokana mihitsy manera azy.
Fantatra ihany koa fa misy ny mpampanofa trano fandraisam-bahiny miray tsikombakomba amin’ireo mpanera sy ireo mpila filàna, ka mahavatra mitady ankizy mpianatra mihitsy hampiarahina amin’ireo mpanjifany. Eo ihany koa ny fanararaotana ataon’ireo mpanao vato izay mandraviravy vola amin’ireo mpianatra ary mahavita miambina eny ivelan’ny sekoly miandry ny ora firavana.
Efa misy ireo sekoly izay sarotiny tokoa amin’ity resaka hafahafa manimba ankizy ity ary efa nandray fepetra manokana entina hamehezana ny mpianatra saingy tsy ho araka avokoa ny ataon’ireo ankizy, hoy ireo mpanabe. Ahiana hanimba ny ho avin’ny ankamaroan’ny mpianatra, araka izany, ny sehatra tahaka izao. Nomarihin’ny ray aman-dreny iray fa nanomboka tamin’ny fisokafan’ny kariera taty Ambatondrazaka no nampirongatra io fomba ratsy io.